Gịnị ebe enyí na ezé na-akụziri anyị banyere ozizi evolushọn - News Ọchịchị
Gịnị ebe enyí na ezé na-akụziri anyị banyere ozizi evolushọn
Iji gosi na evolutionary mgbanwe bụghị mgbe niile ala ruo mkpụrụ ndụ ihe nketa, dị nnọọ imeghe elephant n'ọnụ ...
Isiokwu a na-akpọ “Gịnị ebe enyí na ezé na-akụziri anyị banyere ozizi evolushọn” e dere site Alice Roberts, n'ihi na The Observer on Sunday 31st January 2016 07.00 UTC
ogologo oge gara aga, ikekwe ọbụna tupu eru n'eluigwe mists nke oge, e nwekwara oké ezinụlọ nke ụmụ anụmanụ na biri na Africa. The akụkọ amalite ụfọdụ 10 nde afọ gara aga mgbe ahụ ndị ezinụlọ na-eto na-agbasa. Around nde mmadụ atọ gara aga, a n'alaka ụlọ ọrụ nke ọ wusiri n'ime Europe na Asia. Dị ka ụmụ anụmanụ kpaliri n'ókèala ndị ọhụrụ, ha na-emegharị ka ihe edere edere climes. N'ikpeazụ, ụfọdụ agafe àkwà mmiri nke Beringia, migrating site n'ebe ugwu-n'ebe ọwụwa anyanwụ Asia n'ime North America.
Ọ na-ada a maara akụkọ. N'ezie, ihe a bụ ihe niile banyere nna nna anyị hà - na African si malite na Miocene, na isi fossils pụtara site n'oge ochie sediments na Kenya; ụfọdụ n'ime otu a colonizing Europe na Asia; -eme njem banye n'ụwa ọhụrụ. Ma nke a abụghị akụkọ nke hominins: nke australopithecines, paranthropines na Homo. Nke a bụ akụkọ nke elephantines: nke mammoths, Loxodonta na Elephas.
Akụkọ ya nke elephant ezé bụ n'ụzọ ụfọdụ dị iche iche, mgbanwe omume n'ụzọ doro anya tupu a mgbanwe mmewere
The kasị dị ịrịba e ji mara bi enyí - Kporo na tusks - a hụrụ ha gomphothere nna nna site 20 nde afọ gara aga. N'ihi na a nnukwu anụmanụ na obere olu, ogwe bụ kemgwucha bara uru development, ikwe ndị a proboscideans ịghọta epupụta na-ewetara ha onye ọnụ, otú a na-enye ihe evolutionary uru.
Mmepe nke a na akpati mgbanwe nke incisors n'ime tusks na-esonyere a mgbanwe ke udi nke e wezụga okpokoro isi. Inside ọnụ, ezé na-agbanwe. A obere n'agba ekpe ngbagwoju a zuru set nke molars, mgbe ezé mkpa na-enwe iji na-azụ a ogologo ndụ si uru nke arọ wear. Evolution nyere a mma n'anya ngwọta ma nsogbu. Kama inwe a dum set nke premolars na molars kwabara n'ime ọnụ n'otu oge - dị ka nke dị n'ọnụ gị - e nanị otu, nnukwu nha nha bi n'akụkụ abụọ nke elu na nke ala n'agba n'oge ọ bụla. Dị ka eze a na-eyi ala, ọzọ a ga-eto eto n'azụ ya, njikere slide n'ime ebe mgbe eyi-apụ nha nha we dapu, enye ụmụ anụmanụ na isii tent nke ezé na a ndụ.
Onye na-ese si echiche nke a gomphotherium, a anọ-tusked nna ochie elephant, na mkpụrụ ya. Foto: Alamy
Ezé mmanu ndi mere gomphotheres na enyí chebe ihe mgbaàmà nke ha diets. The ruru nke dị iche iche isotopes nke carbon na nha nha Enamel-egosi ma a akpan akpan onye na-elekwasị anya ọzọ na-eme nchọgharị na epupụta ma ọ bụ na-eri ahihia. The n'ala ahịhịa nke Africa mbụ malitere gbasara gburugburu 10 nde afọ gara aga na isotope analysis na-ekpughe na mbubreyo gomphotheres na n'oge enyí Switched eri tumadi ahihia gburugburu nde mmadụ asatọ gara aga. na enyí, a mgba ọkụ na-apụta ìhè ọzọ mgbanwe ha ịta ikikere ezé, nke ghọrọ ugboro atọ dị ka ogologo, na a proliferation nke Enamel ridges. ma ndị a adaptations na abrasive nri pụtara gburugburu nde ise gara aga, nde mmadụ atọ afọ mgbe nke mgba ọkụ si adụ epupụta na ikike grasses. Na ogo nke mkpebi anyị nwere ike isi nweta mgbe achọ laa azụ n'ime gara aga, ọ bụ mgbe siri ike ịmata ihe bu ụzọ bịara - a mgbanwe omume ma ọ bụ na mmewere. Ma na nke a, ọ bụ nnọọ doro anya: mgbanwe ezé lagged ọtụtụ nde afọ mgbe mgbanwe nri.
Anyị evolutionary chepụtara akụkọ, na organism onwe ya mgbe o yiri ka egwu a n'ezinụlọ ọrụ: a n'enweghị ike ọ bụla aja, fọrọ nke nta, nke mgbanwe ndị ya na gburugburu ebe obibi ma ọ bụ mmụba na ya na mkpụrụ ndụ ihe nketa. Ma akụkọ nke elephant ezé bụ n'ụzọ ụfọdụ dị iche iche, mgbanwe omume n'ụzọ doro anya tupu a mgbanwe mmewere (na isi mkpụrụ ndụ ihe nketa ntuziaka maka ntolite eze). Ikekwe anyị ekwesịghị iju site na nke a: otito plasticity pụtara na ndị ikpeazụ udi nke anụmanụ si ahu kpebisiri ike ọ bụghị naanị site DNA ma site nabata mmadụ. Na anụmanụ ndị ọzọ mgbanwe n'ụzọ ha si enwe mmekọrịta na gburugburu ha karịa ka anyị na mgbe ụfọdụ iche. Dị ka enyí na-egosi, isi iyi nke novelti n'ozizi evolushọn na-esi omume kama site mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Ezé dị n'Africa elephant okpokoro isi. Foto: Images nke Africa Photobank / Alamy
Ọ bụ naanị kwe omume na ụdị mgbanwe, sitere n'aka na a gbanwee omume, rụọ ọrụ dị mkpa ụmụ mmadụ si n'enwe pụta. Around abụọ na nde afọ gara aga, e nwere otu nnukwu nnofega ke idem udi n'ebe obere ụkwụ, nke mbụ na-egosi na Homo erectus. Ọ bụ yiri ka ọtụtụ ndị ọhụrụ anatomical atụmatụ, si aba ụkwụ ka ikpọ gluteal uru ahụ na chunkier òtù Achilles akwara, na-metụtara ụba arụmọrụ ke agba ọsọ. Ọ bụrụ na otu ìgwè nke ụmụ mmadụ wee malite ịgba ọsọ mgbe nile, ikekwe ka ha na ichu nta ma ọ bụ achọgharị ihe n'ụzọ dị irè, anatomical mgbanwe ga-eso, karịsịa n'etiti ndị ka na-emepe emepe na-eto eto. Ozugbo agba ọsọ ghọrọ akụkụ dị mkpa nke omume, ọ bụla mmụba na enwekwukwa ọ ga-enweta ihu. Ma ka isi iyi bụ nke pụtara ọhụrụ, ikekwe, bụ na mgbanwe n'omume na-adịghị a mkpụrụ ndụ ihe nketa mutation.
The oké proboscideans na-awagharị na African Okirikiri ebe anyị onwe anyị na nna nna, ghọrọ usoro echetara anyị na evolutionary novelti ọ bụghị mgbe nile na-adabere n'Okwu mkpụrụ ndụ ihe nketa.
49745	1 Alice Roberts, Animals, Nkeji edemede, Biology, Discover, Evolution, Atụmatụ, Science, The New Review, The Na
← Gịnị mere na Olee oysters Mee Pearls Ị Pụrụ Gbaa Windows 95 Inside Your Browser Ugbu a [PcWorld] →